Wasiirka Turhan: Haddii Channel Istanbul aan la Halin Tani way Cadaadin Doontaa | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara34 IstanbulWasiirka Turhan: Haddii kanaalada aan laga qaban Istanbul, tani waxay ina cadaadin doontaa
28 / 12 / 2019 34 Istanbul, GUUD, Channel Istanbul, WADADA, Gobolka Marmara, TURKEY
Haddii kanaalka turhan aan laga samayn Istanbul, tani waa la daabacayaa
Cahit Turhan, Wasiirka Gaadiidka iyo Kaabayaasha ee Jamhuuriyadda Turkiga, ayaa booqday Governorate ka dib markii ay dib u eegis ku sameeyeen dhismaha wadada loo yaqaan 'ring ring' ee deegaanka ğankırı Kenbağ.
Turhan ayaa soo dhaweysay Guddoomiyaha Xamdi Bilge Aktaş, oo saxiixday buugga sharafta ee guddoomiyaha.
Booqashada degmada Çankırı iyo la kulanka duqa magaalada İsmail Hakkı Esen, Turhan waxaa laga helay macluumaad ku saabsan magaalada.
Ka dib Wasiirka Turhan, oo ku yaal bartamaha degmada Çankır central wuxuu la kulmay Duqa Bayram Yavuz Onay, wuxuu helay macluumaad ku saabsan degmada.
Turhan ka dib wuxuu aaday magaalada Şabanözü, khudbadiisi uu ku horjeediyey hoolka magaalada, wuxuu sheegay inay qabteen balaayiin rodol ah illaa iyo hadda adeegga.
Isagoo carabka ku adkeeyay in umada Turkigu u qalmo in ay noqoto wadan weyn, ayuu yiri Turhan, “Waqti ka dib, waxay noo kala qaybiyeen qaybo, waxay noo weeciyeen maamulo, laakiin markale waan soo kabanay oo dib ayaan u aas aasay oo aas aasnay ​​boqortooyooyin. Waan soo sarakacay, waan dhisnay, waxaan dhisi doonnaa boqortooyadeena cusub, waxaan rajeynayaa. Ilaa inta aan ku jirno midnimo iyo wadajir. ”
Tusaalahaa, Turhan sharaxay in Turkey waa go'aan aad u weyn in ay dhacdo, waxa ay sidoo kale muujiyay in ay si wadajir ah u maciinsan lahaa qaran.
Taasi waxa ay noqon waa in ciidamada danaha Turkey ayaa tilmaamaya Turhan, ayuu yiri:
Alesel Nasiib darrose, waxaa jira mucaarad weyn oo waddankeenna ka jira, waxa aan ku qabanno waa 'qalad'. Waxaan buundooyin u dhisinaa Bosphorus, waxaan hoos tagnaa Bosphorus, buuraha ayaan qodaynaa, waxay dhahaan 'waad qaldan tahay'. Hadda, 'Channel ayaa sameyn doona Istanbul' waxaan dhahnay, iyaguna way diidan yihiin. Kalsooni kama qabaan fikirkooda nidaamsan. Ummaddani waxay u kacday inay gawaarida samayso, 'ma sameyn kartid' ayay yiraahdeen, ma aysan yeelin. Waxay isku dayeen inay sameeyaan diyaarado waxayna yiraahdeen 'Maamuli karno ma sameyn karno'. Waxay isku dayeen inay dhisaan biyo-xireenno u gaar ah, buundooyin u gaar ah, wayna ka soo horjeedaan. Hadda waxaan sameyneynaa tan. Iyada oo ay sabab u tahay xasilloonida siyaasadeed iyo tan dhaqaale ee waddankeenna laga helay, waxaan ku fulinaa mashaariic badan dhisid-ku-wareejinno annaga oo aan lacagna ka isticmaalin miisaaniyadda. Mashaariicdaasi waxay iska bixiyaan naftooda. Waxay sidoo kale isku dayaan inay dhaleeceeyaan tan.
Isagoo sheegay inay jiraan guulo badan oo lagu gaari karo Mashruuca Channel Istanbul, Turhan wuxuu xasuusiyay in markab uu ku dhacay xeebta Bosphorus.
Isagoo tilmaamay in tirada maraakiibta maraya Bosphorus ay gaarayaan 43 kun sanadkii, Turhan wuxuu sii waday: var Waxaa jira maraakiib ku xaniban meelaha laga soo galo Bosphorus, dhanka xeebta Marmara iyo Badda Madow, iyagoo sugaya maalmo. Maraakiibta ayaa sugaysay maalmo si ay u gaaraan halka ay u socdaan. Halkaas ayay dadku halis ugu jiraan. Duufaan ayaa jaba, markabka ayaa jiida doonta halkaas, waxay u geysaa xeebta. Ma noqon karnaa dhagaystayaal? Tani waa marin biyo mareen caalami ah. Montreux ayaa dejisay xeerarka. Waxay go’aamisay xuquuqda iyo sharciga axsaabta. Waxaan halkaan ku leenahay xuquuq madaxbanaan. Waxaan ku sameyneynaa xeerarka halkan, laakiin si loogu adeego taraafikada caalamiga ah si nabad ah oo aamin ah, waxaan ku qiyaasnay ​​25 oo markab oo keliya. 43 kun ka badan hadda. Tani way sii kordheysaa sanad walba. ”
Wasiirka Turhan ayaa sheegay in garoonka diyaaradaha Istanbul loo dhisay maxaa yeelay baahida lama fulin. Haddii aan sidaas yeelno, culays ayaa na saaran doonaa. Maraakiibta halkaa sugaya, shilalka halkaas ka jira, wasakhaynta badda, qaraxyada ama shilalka ka yimaadda maraakiibta ayaa annaga na dhibaya. Waxaan u baahan nahay taxaddar. Ugudambeyntii, waxaan lacag ka heli doonnaa markabka maraya Dr. Kul
Khudbadiisa kadib Şabanözü wuxuu booqday dawlada hoose wuxuuna xog kahelay Duqa Magaalada Faik Özcan.
Kanal Istanbul, caymiska deegaanka ee Istanbul
DİSK waxay dabagal ku sameeyeen daadadka shaqaalaha shaqaalaha tareenada Kuuriya